तपाइलाई बढी रिस उठ्छ ? यसरी कम गर्नुहोस् | KathmanduPati
तपाइलाई बढी रिस उठ्छ ? यसरी कम गर्नुहोस्
२०७५, ५ माघ शनिबार १४:५२
एजेन्सी – मानिसमा उत्पन्न हुने रिस भावना हो । यो मात्र नभएर खुसी, सुखी, दुःखी हुनु, हाँस्नु सबै इमोसन हुन् । तर, अत्यधिक रिस भने भावना मात्र नभएर मानसिक समस्या पनि हो । जसलाई इन्टरमिटेन्ट एक्सप्लोसिप डिसअर्डर पनि भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसले आफ्नो जीवनमा उत्पन्न हुने भावना अर्थात् इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने त्यो मानसिक समस्या हो ।
– लामो स्वास लिनुहोस् । लामो स्वास लिनाले रिस नियन्त्रणमा आउनुका साथै मस्तिष्कमा शान्ति मिल्ने र रिल्याक्स समेत प्राप्त हुन्छ । रिस के कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हो ? त्यसको कारण खोज्नुभयो भने रिस नियन्त्रणमा तपाइँ धेरै हद सम्म सफल हुनुहुनेछ ।
जाडो बढ्दै जाँदा शरीरमा के हुन्छ ? कसरी जान्छ ज्यान ?
भ्यालेन्टाइन डेमा वर्षा र संजोग कोइरालाको बिहे हुने